Dinika nasionaly ao Kamerona diso lalana · Global Voices teny Malagasy
Dinika nasionaly ao Kamerona diso lalana
Ahian'ny olom-pirenena tsy hampitsahatra ny krizy ny dinika
Voadika ny 10 Oktobra 2019 9:29 GMT
Ny minisitry ny fifandraisana tao Kamerona tamin'izany fotoana izany sady mpitarika ny antoko Mandatehezam-Panavotam-Pirenena, Issa Tchiroma (Ankavia), fanentanana ho fanohanana ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny filoha Paul Biya tao Garoua, Kamerona, 22 Septambra 2018. Saripikan'i M.E. Kindzeka/Voice of America azon'ny rehetra ampiasaina via Wikimedia Commons.
Nanomboka tamin'ny alatsinainy 30 septambra 2019 ny herinandro fifampiresahana hamaranana ny ady ifanaovan'ny tafiky ny governemanta sy ny milisin'ny faritra miteny anglisy ao Kamerona, ary tontosaina ao amin'ny renivohitry ny firenena ao Yaoundé izany. Na izany aza, mitarazoka ao amin'ny tahotra ny olompirenena fa tsy hampitsahatra ny krizy ny fifampiresaham-pandriampahalemana.
Nampiantso fifampiresahana ny mpitarika an'i Kamerona, Paul Biya, izay nitantana ny firenena hatramin'ny taona 1982, tamin'ny 10 septambra 2019 mba hamahana ny olan'ny fiokoana efa naharitra telo taona. Efa nitarika fahafatesan'olona 2000 eo ho eo sy namindra olona mihoatra ny 500.000 ao amin'ny faritra mpiteny anglisy ao avaratra andrefana sy ao atsimo andrefana izao olana izao, araka ny nolazain'ny Firenena Mikambana.
Mahatsiaro ho ataon'ny maro an'isa mpiteny frantsay anjorom-bala ny Kameroney mpiteny anglisy, izay milaza fa mampiroborobo politika fanaovan-dalàna sy lalàna mpamoritra ny governemanta mpiteny frantsay. Ny hetsi-panoherana izay notarihan'ny mpampianatra sy mpanao lalàna tamin'ny ankapobeny dia nivoatra ho hetsika mitam-piadiana miantso ny fisintahan”i Kamerona mpiteny anglisy.
Vakio bebe kokoa: Cameroon on a path to ‘national dialogue’ as Anglophone crisis continues
Nilaza tao amin'ny Twitter ny mpiserasera Batata Boris Karloff fa izao fifampiresahana izao no “hanao na hanapaka ny firenena mitsipotipotika:”
Manomboka ao Yaoundé androany ilay Dinika Nasionaly lehibe noresahana betsaka.
Ny vokatr'izao andro dimy ifampiresahana izao no hanao na hanapaka ny fahatapatapahan'ny firenena vakivaky
Nakisaka ireo mpitarika separatista sy ny mpanohitra
Na izany aza, tsy noraharahian'ny dinika notarihan'ny governemanta ny mpitarika ny mpisintaka, Julius Ayuk Tabe, izay, nahazo sazy higadra mandra-pahafaty tamin'ny volana aogositra tamin'ity taona ity, niaraka tamin'ny mpikambana hafa.
Tabe no mitarika hetsika iray izay miezaka mandrafitra firenena miala amin'i Kamerona, antsoina hoe Ambazonia, ary nampiseho ampahibemaso ny fankahalahan'izy ireo ny fihaonambe ireo mpitarika ny hetsika.
“Tsy misy Ambazoniana handray anjara amin'ny teny tsy loa-bodin'i Biya,” hoy i Ayaba Cho, mpisintaka malaza any ivelany, tao amin'ny Reuters.
Tsy mandray anjara amin'ny fifampiresahana ihany koa ilay mpitarika ny antoko Hetsika Fanavaozana indray an'i Kamerona, Maurice Kamto, izay nosamborina tamin'ny Janoary tamin'ity taona ity noho ny fikonokononana fihetsiketsehana taorian'ny fifidianana. Tsy mety hanatrika izany ny antokony raha tsy havotsotry ny fanjakana i Kamto.
Nizara fisalasalàna amin'ny dinika ihany koa i Vy tao amin'ny Twitter:
Izany no antony tsy maintsy hanafahana an'i Kamerona Tatsimo #SouthernCameroons! #NationalDialogue fahadalana! “Maniry” TSY “Maniry”. Nanao ezaka hadalana isika! Zarao ity firenena voahozona ity ry Firenena Mikambana
Fifanakalozan-dresaka nodidian'ny governemanta
Maro tamin'ireo (Anglôfôna) mpiteny Anglisy tony fihetsika no maniry fanovana lalàmpanorenana, miaraka amin'ny fiverenana amin'ny rafitra federaly ho fanalahidy, saingy tsy ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fitondrana Biya izany:
Nihazona ny heviny i Agbor NKongho tamin'ny fanambarana an-gazety fa ilaina ny fiverenany amin'ny rafi-panjakana federaly ho fomba hamahana ny krizy Anglôfôna ao Kamerona, 30 septambra 2019.
Saingy nanangana vaomiera valo ho ampahany amin'ny fifanakalozan-dresaka momba ny fandriampahalemana izay mifantoka fotsiny amin'ny fitsinjaram-pahefana, rafitra napetrak'i Biya tamin'ny taona 1996 ny governemanta Biya.
Nilaza tamin'ny Reuters tamin'ny 30 septambra ny filoha be fanantenana teo aloha, Akere Muna, izay nanatrika ny fifanakalozan-dresaka nasionaly fa: “Hafahafa izany hoe tsy manana vaomiera hiresaka momba ny federalisma, izay fototr’ izany rehetra izany.”
“Tena tsy mety ny tsy manana vaomiera hiresaka momba ny federalisma, izay fototr'izany rehetra izany.” – Akere Muna, mpanao politika, Kamerona
Naneho bebe kokoa ny fahadisoam-panantenany tao amin'ny Twitter ihany koa izy noho ny jadon'ny governemanta amin'ny hetsika:
“Mitaky famerana ny fe-potoa-piasan'ny filoham-pirenena ho 2x5taona ary fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa i Sultan Mbombo Njoya (iray amin'ireo mpitondra foko any Kamerona). Ny Praiminisitra (Joseph Dion Ngute izay mitantana ny fifanakalozan-kevitra) kosa mampahatsiahy antsika hifikitra amin'ny fandaharam-potoana fa tsy hivoana amin'ny lohahevitra.”
Raha ny zava-misy, dia lasa firenena iray tamin'ny taona 1961 teo ambanin'ny rafitra federaly ny Kamerona frantsay sy anglisy, izay nananan'i Kamerona anglisy fizakantena tamin'ny fisian'ny polisy, governemanta sy rafitra ara-pitsarana manokana. Saingy nofoanan'i Ahmadou Ahidjo, filoha teo alohan'ny filoha Biya tamin'ny taona 1972 ny federalisma- namorona repoblika mitambatra izay nohamafisina sy navondron'i Biya 86 taona tao anatin'ny taona maro.
Ankehitriny dia maro no maniry ny hiverenan'izany vanim-potoana izany, anisan'izany ny lehilahy iray antsoina hoe Martin, izay mpandrafitra ao Mutengene, tanàna ao amorontsiraka andrefan'i Kamerona. Tsy nety nanome ny anarany feno izy noho ny tahotry ny famalian'ny governemanta na mpisintaka.
“Tsy mahita na inona na inona mivoaka avy amin'izany fihaonana ao Yaoundé izany aho. Niresaka momba ny federalisma isika saingy tsy voalazan'ny [governemanta] izany. Amiko dia fivorian'ireo mpanohana ny [Hetsika Demokratikam-bahoaka any Kamerona] CPDM izany, ”hoy izy tamin'ny Global Voices tamin'ny alahady 29 septambra tany Buea, raha nanatrika fotoam-piangonana izy.
“Tsy mahita na inona na inona mivoaka avy amin'izany fihaonana ao Yaoundé izany aho. Niresaka momba ny federalisma isika saingy tsy voalazan'ny [governemanta] izany. Amiko dia fivorian'ireo mpanohana ny [Hetsika Demokratikam-bahoaka any Kamerona] CPDM izany. “- Martin, Mutengene, Cameroon
Ho an'i Relly Ebini, miasa tho mpaka sary any Buea, tanàna afovoany Anglôfônina, resy lahatra tanteraka izy fa ny federalisma no zavatra tsara indrindra amin'ny adihevitra.
“Te hino aho fa hijanona amin'ny resaka federalisma ny resaka. Izany no irianay Anglôfônina ary mino aho fa hampitsahatra ny krizy izany, ”hoy izy tamin'ny Global Voices tamin'ny alahady 29 septambra lasa teo.
Noho ireo olona maro nafindra toerana, manantena i Martin fa hitsidika indray ny tanànany any amin'ny faritra avaratra andrefana izy indray andro any:
“Rehefa nanomboka ny krizy tamin'ny taona 2016, dia tsy nandeha nankany an-tanànako aho. Efa-taona izao, tsy tany aho noho ny fifanolanana, ”hoy izy.
10 ora izayBorkina Faso